Ogaden News Agency (ONA) – Bambanooyin Loo Kala Diray Madaxda Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka.
Bambanooyin Loo Kala Diray Madaxda Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka.
Posted by Dayr	/ October 26, 2018
Ciidamada amaanka ee Maraykanka ayaa gacanta ku dhigay lix bambaano oo boostada loo dhigay qaar kamid ah Madaxda xisbiga Dimuquraadiga iyo waliba Telefishinka CNN xafiiskiisa New York.
Illaa iyo hada lama yaqaan cida soo dirtay bambaanooyinkan balse waxaa la tuhunsan yahay kooxaha xagjirka ah ee garabka midig (cunsuriyiinta) taageerta Madaxweynaha xilka haya ee Donald Trump.
Goobaha loo kala diray Bambaanooyinka ayaa waxaa kamid ah ah:
1- Gurriga Madaxweynihii hore ee Barack Obama ee magaalada Washington DC
2- Gurriga Madaxweynihii hore Bill Clinton iyo xaskiisa Hillary Clinton ee New York
3- Xafiiska Xildhibaanad Dimuquraadiga Maxine Waters, xildhibaanada Madaw ayuu Trump marar badan caayey.
4- Gurriga Xeer illaaliyihii hore Eric Holder oo kamid ah xubnaha firfircoon ee Dimuquraadiga
5- Gurriga Maalqabeenka George Soros oo maalgeliya Xisbiga Dimuquraadiga, ninkan taajirka ah ayey taageerayaasha Jamhuuriga si weyn u neceb yihiin.
6- Xarunta Telefishinka CNN ee magaalada New York.
Dhamaan bambaanooyinkan ayaa la helay kahor intii aysan qarxin, waxayna danbi-baarayaasha sheegeen in ay tuhunsan yihiin in hal qof ama hal koox ay falkan ka danbeeyaan, maadaama qaabka loo sameeyey ay isku mid yihiin.
Baaritaanka ayaa socda waxaana digniin laga siiyey shacabka Maraykanka inaysan furin baakadyada loogu soo diro boostada hadii ay ka shakiyaan ama uu soo gaaro boosto u muuqaal eg kuwa hada gacanta lagu dhigay, sida lagu sheegay baaq hay’ada FBI ay shacabka u sii marisay bartooda Twitterka.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa falkan cambaareeyey xili si weyn loo tuhunsan yahay in hadaladiisa qalafsanaa ee ka dhanka ahaa xubnaha la bartilmaamsaday ay dhici karto inay dhiiri-gelisay kooxda weerarkan ka danbeysa.
Maamulka magaalada New York ayaa falkan ku tilmaamay weerar argagaxiso oo la doonayo in shacabka lagu cabsi geliyo. Dhacdadan ayaa kusoo beegantay xili labo todobaad ay ka harsan tahay doorashooyinka Kongareeska iyo Gobalada dalkaasi Maraykanka oo ay si weyn ugu loo lamayaan xisbiyada Dimuquraadiga iyo Jamhuuriga.